चीफ सा’ब सैनिक नियमावली परिवर्तन के का लागि ?
नेपाली सेनामा नयाँ परिवर्तन, नयाँ नियमावली संशोधन र फाष्टट्रयाक सबै हटेर सबै जना सैनिक खुसी थिए कि अब राम्रो र नियमअनुसार सरुवा प्रमोसन र व्यवस्था हुन्छ भन्ने । तर, त्यो नियमावली सोझासीधा सिपाही र पीडित सैनिक अधिकृतहरूका लागि मात्रै रहेछ । नियमावली संशोधन भयो कसका लागि ठूला सैनिकका लागि कि तल्लो दर्जाको लागि ? जर्णेल–कर्णेलहरूका लागि संशोधन भएको भए आज नियमावली पास भएको एक हप्ता भयो लागू हुन्थ्यो होला । तर, नयाँ नियमावलीले त सरुवा बढुवा कसैलाई छोएको छैन ।
के नयाँ नियमावलीमा एक बर्ष पृतना वा कुनै कमाण्ड गर्नुपर्ने, १५ दिने सूचना अधिकृतको विदा बसेपछि वा रिटायर्ड भएपछि मात्रै बढुवाको फाइल उठाउने नियम छ रे ? तर, यहाँ त ७ दिने म्याद राखेर सिफारिस, चीफसा’वका आफन्त घर जान लागे भनेर पुरानो नियमावलीलाई टेकेर बढुवा सिफारिस गरिएको छ रे ?
सरकारले पास गरेको नियमावली कहिले लागू हुने निमुखा अधिकृत बढुवा हुने बेलामा कि कसका लागि हो ? सैनिकहरूलाई वा सबैलाई स्पष्ट हुनु प¥यो । हाम्रा चीफसा’ब त परिवर्तन पक्षधर मानिन्छन् । आफ्नो मान्छे तान्नलाई नियम आएको त होइन होला ?
सेनामा लागू भएको फाष्टट्रयाकले आज सैनिक अधिकृतहरू रुँदै घर जान बाध्य भए । फाष्टट्रयाकले धेरै गुनासो र नराम्रो सन्देश गएर सुरक्षा निकायमा नराम्रो असर परेको थाहा पाएर नयाँ प्रधानसेनापतिले सैनिक नियमावली परिवर्तन गरेको हामीले बुझेका थियौं । तर, ८० प्रतिशत फाष्टट्रयाक त गएको रहेन छ । प्रमुख सेनानीहरूको बढुवा भएको छ नयाँ नियमावलीले छुन्छ भनेर ? के का लागि हतार गरेर पुरानो नियमावली लागू गरियो रक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीज्यू ? के क्याविनेटमा जे आयो त्यही पास गर्ने भए के को गुनासो पोख्नु ?
चीफसा’बले चाहे जस्तो नेपाली सेनामा खै कहाँ भो परिवर्तन ? पेट्रोल पम्पमा पुराना जीहजुरियाहरूकै रजाई छ । पेट्रोल पम्पका रैथानेहरूले करोडौं कमाएर, महल बनाएर हामीलाई कसले छुने भनेर फुर्तिका साथ भन्दै हिंडेका छन् ? हामी विना कहाँ चल्छ भन्छन् ।
खै राशन ठेक्कामा सिपाहीको रासन खाएर मोटाएका सैनिक अधिकृत र ठेकेदारलाई कारवाही ? खै अनलाइन ठेक्का सर्भिस व्यवस्था ? खै संभार रथीको स्वदेश र विदेशको तोकेको रासन सिपाहीले खान पाएका छैनन्, पोशाक पाएका छैनन् शा.से. जाँदा आउँदा कमाण्डरको पेलाई दादागिरी त्यस्तै छ ?
सिपाहीले केही सामान लान÷ल्याउन नपाउने रे । तर, आफू चाहिं गिफ्ट र हाकिमलाई चाहिने उपहार हालेर प्लेन नै भरेका हुन्छन् । चीफसा’बको सुधार र परिवर्तनको चाहना र संशोधित नियम केवल देखाउन मात्र रहेछ भन्ने सन्देश नजावोस् ? सेनाका दुई जना पूर्व जर्नेलले देशका लागि बोल्दा तात्ने चीफसा’ब र सरकारको सेनाभित्र हुने अनियमित काम, खरीद घोटाला र जर्नेल, कर्णेलहरूको रजाईमा किन ध्यान जाँदैन ?
गौरव टण्डुलले सात महिना कल्याणकारीको कमाण्ड गरे, कल्याणकारीमा बसेर ब्यक्तिगत लाभ बाहेक के काम गरे त ? राजेन्द्र क्षत्रीले पुरस्कार स्वरुप विदेशको फोर्स कमाण्डरमा सिफारिस गरे । आज तिनै उपरथीलाई ७ दिन अगावै सूचना र सिफारिस, १५ दिने नियम कसलाई, एकबर्षे कमाण्ड कसका लागि हजुर ? अवकास हुने रथी विदा नै नबसी किन कसरी कुन दफामा सिफारिस भयो ? दवाव, सोर्सफोर्स चाकडी प्रथा हटेको छैन भन्ने प्रमाणित भएन ?
उपरथी योगेन्द्र खाँडले फाष्टट्रयाक प्रोजेक्टमा सिपाहीलाई गोरु जोते झैं जोतेर काम लगाउने तर ईन्जिनियर विभागका प्रमुख चाहिं फाष्टट्रयाक प्रोजेक्टको कमिशनर र सिपाहीको पसिनाको पैसाले २ करोडको गाडी र सचिव मन्त्री र राजनैतिक पार्टीलाई घुस चढाउँदैै हिंडेका छन् । आफ्नो कार्यकाल कसरी बढाउने भनेर उपरथी खाँड दौडधुपमा छन् । उपरथी खाँड २०७६ असारमा अवकासपछि पनि फाष्टट्रयाक प्रोजेक्ट मै रहनका लागि सत्तारुढ दलका नेता, रक्षा मन्त्री र रक्षा सचिवको घरघरमा धाउने गरेको छन् । सिपाही चाहिं विदा जान समेत पाएका छैनन् ।
फाष्टट्रयाक कमाण्डर जर्णेल अब म्याद सकिन लाग्यो भनेर कसरी व्यवस्था गर्ने भनेर मन्त्री र अन्य नेतालाई मिलाउन दिनरात ध्याउने ? सैनिक नियम अनुसार नेताको घरघरमा जान पाइन्छ ? खै कहाँ आयो परिवर्तन ? रक्षा मन्त्रालय त फाइल बोक्ने, क्याविनेट लाने जस्ताको त्यस्तै कपि गर्ने अफिस रनरको काम वाहेक खै के गर्छ ? रक्षा मन्त्री त चाकडी मै मस्त । १० गतेको क्याविनेटबाट पास भएको नियमावली किन लागू भएन ? अहिले बाटै भावी सेनापतिका लागि प्रचार, चलखेल भएको ठीक हो ?
पाँचखालको रासन काण्ड कसले हे¥यो जहाँ ठेकेदारदेखि पाँचखालका सिपाही, जमदार सुवेदार सबैको मिलेमतो हुन्छ रे । अहिलेको सुवेदार मेजरसम्म रासन ठेकेदारसंग मिलेर यति घोटाला गर्नसम्म गरेका छन् । जो आएपनि अनियमित काम गर्नेलाई कसैले केही कारवाही गर्न सकेको छैन ।
चीफ सा’ब ! ब्यारेकमा सिपाहीले गुणस्तरीय खाना, कपडा पाउने र सुरक्षित बासको व्यवस्था मिलाउनुस् र सैनिक नियम विपरीत पतिको दादागिरी हटाउनुस् । शा.से.मा जाँदा आउँदा अनियमित काम के के भएको हुन्छ सिपाहीसंग गोप्य रुपमा बुझ्ने ब्यवस्था होस् । पत्रिकाले जे लेखे नि के हुने हो र भन्ने हैन, चीफसा’ब सोचेर बुझेर काम गरे अबस्य राम्रो परिणाम आउने छ ।
नत्र सेनामा सुधारको अपेक्षा एकादेशको कथा बन्ने छ । आफन्त र चाकडी बाजहरूका लागि मात्र सैनिक नियमावली संशोधन र परिवर्तनको फाइदा पुग्ने होइन कि पीडित सकल दर्जा, सोझासीधा इमानदारीपूर्वक काम गर्नेहरूका लागि पनि परिवर्तन आवोस् ।
–नेपाली सेनाको भलो चाहने अधिकृतहरू